को कहाँबाटा कति मतले विजयी भए ? विवरणसहित - Himalayan Kangaroo
को कहाँबाटा कति मतले विजयी भए ? विवरणसहित
Posted by Himalayan Kangaroo | २२ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०४:५५ |
काठमाडौं । मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणमहरु प्राप्त हुन थालेको छ । हालसम्म प्राप्त परिणाम अनुसार वाम गठवन्धनले तीन स्थानमा विजय हासिल गरेको छ ।
त्यस्तै लोकतान्त्रीक गठवन्धन लगायत अन्य दलले अहिलेसम्म कतै विजय हासिल गर्न सकेका छैनन् । हालसम्म प्राप्त परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ मुस्ताङमा नेकपा एमालेका प्रेमप्रसाद तुलाचन विजयी हुनु भएको छ ।
तुलाचन ३ हजा ५ सय ४४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिन्द्धी नेपाली कांग्रेसका रोमी गौचन थकालीले ३ हजार २ सय ८१ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
प्रदेश सभातर्फ मुस्ताङमा नेकपा एमालेकै ईन्द्रधारा विष्ट १ हजार १ सय ६७ मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ । त्यस्तै मुस्ताङकै प्रदेश सभा ‘ख’तर्फ नेकपा एमालेकै महेन्द्रबहादुर थकालीले २ हजार ५ सय ८४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ ।
त्यस्तै गरी मनाङमा नेकपा एमालेका पाल्देन छोपाङ गुरुङ विजयी हुनु भएको छ । गुरुङले २ हजार तीन सय मत प्राप्त गर्नु भएको छ । उहाँका निकटत प्रतिद्धन्द्धी टेकबहादुर गुरुङ २ हजार २१ मत प्राप्त गर्नु भएको छ ।
मनाङमा प्रदेशसभा ‘क’ तर्फ नेपाली कांग्रेसका चीन्तबहादुर घले ९ सय ९८ मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ । प्रदेश सभा ‘ख’तर्फ नेपाली कांग्रेसका कर्मा गुरुङले एक हजार ३० मत प्राप्त गरी विजयी हुनु भएको छ ।
उता रुकुम पूर्वमा वाम गठवन्धनका कमला रोका विजयी हुनुभएको छ । रोक्का माओवादी केन्द्रकातर्फबाट उम्मेदवार हुनु भएको थियो । कमला रोकाले १० हजार ४ सय ३४ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसका हरीशंकर घर्तीले ४ हजार ४ सय ६ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो ।
प्रदेश सभा तर्फको मत गणना भने जारी छ ।
Previousकर्मचारीले दिनभर घाम तापे, रित्तै फर्कियो मतपेटिका
Nextपछाडी परे रामशरण र अर्जुन नरसिंह
घुस लिंदालिदै नेपाल प्रहरीका डिएसपीसहित दुई जना पक्राउ
१९ माघ २०७२, मंगलवार ०५:१३
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ०२:४८
बलिउड अभिनेता कादर खानको निधनको खबर भुटो
१६ पुष २०७५, सोमबार ०२:४४
४० वर्षमा चीनमा गरिबी ९७% बाट झरेर ३% मा सीमित
४ पुष २०७५, बुधबार ०२:४४